Toddobaadka 7-aad, Cayayaashu waa lacag la'aan, iyo soo-saaris softiweer oo guuleysatay | Martech Zone
Talaado, Oktoobar 9, 2007 Khamiis, Juun 11, 2009 Douglas Karr
Tani waa usbuucii 7 ee shaqadayda cusub waxayna ahayd toddobaad aan caadi ahayn oo loo dabaaldego. Kuweena Dalbashada khadka tooska ah ayaa ka soocaysa dadkii badnaa ee tartanka halkaas ka socday isla markaana si dhakhso leh u qabanaya. Toddobaadka soo socda waxaan u duulaynaa Tampa si aan ula hadalno makhaayad kale oo laga iibsado, mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn dalka.
Waxa soo jiidanaaya macaamiishan ayaa ah mid fudud. Waxaan helnaa amarka maqaayada. Taasi waa waxa ay ku saabsan tahay, sax? Markaad dalbato khadka tooska ah, waxaad rajeyneysaa inaad hesho badeecada - si dhakhso leh oo sax ah. Qaar ka mid ah tartamada ayaa naftooda ku mashquuliyay dhamaadka hore ee dhalaalaya iyo isku dhafka aan muhiimka ahayn. In kasta oo ay u muuqdeen kuwo qurux badan, haddana ma helayaan amarka makhaayadda. Haddii aadan bixin karin amar sax ah, waqtiga ku habboon, oo laguu xaqiijiyo inay sameysay… markaa waxaad u baahan tahay inaad si fudud uga baxdo ganacsiga.
Waxaa jira qaar ka mid ah shirkadaha 'habeen-ka-duulaya' ee dhisay garaashka garaashka halkan iyo halkaas, waxaana jira shirkado kale oo halkaas ka jira oo fikrado waa weyn leh laakiin iyagu si fudud uma gaarsiin karaan maxaa yeelay waxay ka maqan yihiin hibada ama hoggaaminta. Waxaan ku biiray shirkad leh tan ugu fiican. Waxaan leenahay karti-xirfadeed fog, dhismayaal aan caadi aheyn iyo horumariyeyaal, iyo inta badan xiisaha aan u qabo inaan wada dhigno.
Bilaabidda, Wadada waxay gaareen go'aano miyir qab ah oo ay si xoog leh ugu maal gashadeen dadka hibada leh, xal adag, ka dibna waxay bilaabeen inay ka shaqeeyaan warshadaha. Waxay bilaabaysaa inay bixiso. Qaab dhismeedka ka dambeeya isdhexgalka dhibcaha-iibku waa qaab fariin ah oo tafaariiqleyda ugu waaweyn adduunka ay ku faani doonaan. Waxa kaliya ee shirkadeenu ka maqnayd waxay ahayd aqoonyahan ku xeel dheer taraafikada… waa meeshii aan ka soo galay.
Waxaan u maleynayaa in shaqadaydu ay u egtahay sida ninka ruxaya calamada Nascar. Uma lihi karti badan sida darawallada ay u tartamayaan, ama milkiilayaashu, ama sida layaabka leh waxa ka hooseeya daboolka. Laakiin isha ayaan ku hayaa tartanka, kor u qaadista calanka jaallaha ah markii dhib nagu dhacdo, ruxaya midka casaanka ah markay tahay inaan istaagno, iyo ruxruxida calanka jeegga ah markaan sameyno waqtigeena ugu dambeeya. Waa tartan aan caadi aheyn laakiin waxaan hayaa qarax ku hareereysan faa'iidooyinkan! Oo wiilyahow xawaare ayaan ku soconnaa!
Toddobaadyadii la soo dhaafey horumariyeyaasheennu waxay dhammaystireen oo ay sii daayeen Is-dhexgalka Meheradda Xarunta Wicitaanka ee Xarunteena Wicitaanku ugu yeertay tii ugu fiicneyd ee ay abid arkaan. Waxay ahayd naqshadaydii ugu horreysay ee alaab leh Wadada, markaa runtii waxaan dareemay inaan u baahanahay inaan garaacno orod guri. Kooxda horumarku waxay qaateen shuruudahayga waxayna dhisteen waxyaabo badan oo ka mid ah kor u qaadista taas oo ka sare martay wixii laga filaayay oo dhan. Waxay u shaqeysaa si bilaa cillad ah waana loo adeegsan karaa adeegsiyo kale oo badan.
Kulankii aqbalaada wuxuu ka mid ahaa kii ugu qosolka badnaa ee aan abid ka soo qeyb galo… wax su'aalo ah ma jirin wuxuuna socday 10 daqiiqo oo dheer. Waxaan tusnay barnaamijka wayna aqbaleen. La dhammeeyay!
Waxaan u sii deynay barnaamij suuqgeyn email ah oo suuq geyn ah macaamiisha Warshadaha Makhaayadaha Qaranka. Waxaa la isiiyay furayaasha aan ku wadi karo labada fariin iyo qaabeynta emaylka. Natiijooyinka hordhaca ah waa heerarka jawaab celinta heerka warshadaha B2B.
Waxaan sidoo kale qaadanay mashruuceena dib udhaca maanta oo aan dhameystirnay ciribtirka cilladdii ugu dambeysay ee arjiga ku jirtay. Hadda waxaan ku jirnaa shaqo ku saabsan kor u qaadista, sameynta qorshayaal isbeddelada kaabayaasha (ka hor inta aan loo baahnayn) iyo soo saarista noocyada soo socda ee arjiga (ka hor inta aan la codsan). Waxaan isku xujeynayaa naftayda in aan il gaar ah ku eego dhamaan ilaha iyo maareynta kooxo badan oo aan shaqo u qabanay, laakiin waxay ahayd 7 todobaad oo layaableh!
Qof baa i qanciya!
Tags: Arbacada ahLinkedInraadinta dukaamaysiga deegaankamilomilo soo qaadosetin kuxiran
Oktoobar 10, 2007 at 11:54 AM
Hambalyo, Doug. Akhrinta ayaa isiisay goos goos!
Oktoobar 10, 2007 at 10:46 PM
Mahadsanid Julie! Runtii waan ku faraxsanahay markaan helay urur i shaqaaleeyay, i aaminay, oo awood ii siiyay inaan sameeyo isbedelada aan isleeyahay waa lama huraan. Had iyo jeer waa wax lala yaabo waxa shaqaaluhu sameyn doonaan markaad u oggolaato!